Banyere Anyị - Beijing Allwin Pack Co., Ltd.
Allwin Pack emi odude ke Beijing nke China, nke bụ a mbara nri nkwakọ enterprise, pụrụ iche na aluminum foil akpa, plastic containers, ebu Ọdịdị imewe na mmepe, n'ibu akpaaka R&D, ahịa na ndị ahịa ọrụ dị ka otu n'ime Integrated ụlọ ọrụ. Allwin Pack si n'ichepụta isi dị na Hebei, Tianjin, Shandong na Guangdong, anyị nwere 30, 000 square mita smart ájá-free nhazi omumuihe, na akpaka robot akpaka nnara nkwakọ ngwaahịa na akpaka ahihia mgbake na imegharị ihe maka iji usoro. akụrụngwa nnyocha na arụmọrụ ule laabu, ebu imewe laabu, anyị mepụtara na-anwale fọrọ nke nta ka otu puku nke ezi nhazi Ebu dị ka onye ndú na nke a ụlọ ọrụ.
Allwin Pack na-eji akụrụngwa niile dabara na ụkpụrụ gburugburu ebe obibi nke ụwa, ha niile bụ nri nri. Anyị wuru ogologo oge
mmekorita ya na ndị ahịa si North America, Europe, Japan, Austuralia, Asia yana ụgbọ elu, nnukwu ụlọ ahịa, ọrụ nri na ndị na-emepụta nri.
Allwin Pack binyere aka na nkwekọrịta nnukwu ahịa na ogologo oge na ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa na USA, iji nye ha pan zuru oke / ọkara wdg, ngwaahịa Allwin Pack enwetala nnabata na ahịa North America n'ihi ogo dị elu, Allwin Pack nwere e toro ya dị ka onye na-eweta ngwaahịa dị mma.
Ngwa ndị Allwin Pack gosipụtara gụnyere ngwongwo aluminium, akpa plastik, mkpuchi plastik, mpempe akwụkwọ mpịakọta ụlọ, akwụkwọ mpịakọta mpempe akwụkwọ, mpempe akwụkwọ, ihe mkpuchi ọkụ na iwepụ ihe wdg, gbakọtara karịa 700 ihe.
Allwin Pack na-ejikwa ngwaahịa dị mma na-arụ ọrụ niile maka usoro teknụzụ na ọrụ dị iche iche, yana echiche enyi na ahụike, nchekwa na nchekwa, anyị na-achọ ịmepụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nwere ngwa ngwa yana ngwaahịa dị mma yana nnyefe ọsọ ọsọ.